अर्थ मन्त्री को बन्ला त?सुरुभयो दौड धुप। | रेडियो झापा 100.7 MHz.
अर्थ मन्त्री को बन्ला त?सुरुभयो दौड धुप।
रेडियो झापा 100.7 MHz. मंगलबार, भाद्र ०९, २०७७ १५:१०:५३
०९भदौ,काठमाडौ/सांसद नभएको व्यक्ति छ महिनाभन्दा बढी मन्त्री बन्न संविधानले दिदैन ।
अबको दश दिनभित्र राष्ट्रियसभाबाट सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित सांसद बन्न नसके अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा स्वतः पदमुक्त हुनुहुने छ ।
डा. खतिवडा हाल तेह्ररो जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ । संञ्चार मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी पाउनुभएका उहाँ सरकारका प्रवक्ता समेत हुनुहुन्छ ।
अढाई वर्ष सरकारमा रहनुभएका पूर्व गभर्नरलाई राष्ट्रियसभामा पुनः मनोनित गर्ने चर्चा पनि थियो । प्रधानमन्त्री ओली पनि उहाँलाई मनोनित गर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ । तर, नेकपा भित्रको विवाद मिलाउने क्रममा अरुलाई नै मनोनित गर्नुपर्ने परिस्थित प्रधानमन्त्रीमाथी आईपरेको छ ।
खतिवडा सरकारबाट बिदाई हुने निश्चितप्रायः भएपछि नेकपाभित्र अर्थमन्त्री बन्ने दौडधुप चलेको छ । राष्ट्रियसभामा मनोनित सदस्य बनेर उपप्रधानमन्त्री सहित अर्थको जिम्मेवारीमा उपाध्यक्ष बामदेव गौतम आउने चर्चा पनि छ ।
गौतम प्रतिनिधिसभाको चुनाव हारेकाले संविधान अनुसार राष्ट्रियसभा सदस्य भएपनि मन्त्री बन्न नपाउने पनि हुनसक्छ । त्यसका लागि कानुनले कस्तो व्याख्या गरेको छ भन्नेबारे परामर्श समेत थालिएको छ ।
गौतम भने सरकारमा गएर शक्ति संञ्चयको रणनीतिमा लागिसकेको बुझिएको छ । स्रोतका अनुसार उहाँ पुनः शक्ति संञ्चय गरेर भविष्यमा नेकपा अध्यक्ष बन्ने महत्वाकांक्षाका साथ प्रस्तुत हुने तयारीमा हुनुहुन्छ ।
अर्थमन्त्री भईसक्नुभएका सुरेन्द्र पाण्डे पनि सरकारमा जाने चर्चा छ । नेकपा विवाद समाधानका लागि मन्त्रीमण्डल पुर्नगठन हुँदा माधव नेपाल र झलनाथ खनाल दुवैद्धारा रुचाईएका पाण्डेलाई अर्थमन्त्री बनाउनुपर्ने लबिङ भइरहेको छ । तर, प्रधानमन्त्री ओली निकट नभएकाले पाण्डेले उक्त मन्त्रालयले पाउने सम्भावना कमजोर छ ।
नेकपाभित्र अर्थमन्त्री बन्न पूर्व एमालेका केही नेताहरु पनि सक्रिय छन् । महासचिव विष्णु पौडेलको सम्भावना पनि रहेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले सकेसम्म आफ्ना विश्वासपात्रलाई नै अर्थको जिम्मेवारी दिने सम्भावना बलियो छ ।